स्थायी समिति बैठकबाट किन भाग्न खोज्दैछन् ओली ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more स्थायी समिति बैठकबाट किन भाग्न खोज्दैछन् ओली ?
स्थायी समिति बैठकबाट किन भाग्न खोज्दैछन् ओली ?
बैशाख २५ गते, २०७७ - १३:०४
पार्टीभित्र पछिल्ला कदमसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामासमेत माग गर्न थालिएको छ । उनले सचिवालय बैठकबाट तत्कालको लागि संकटलाई पार गर्न सफल भएपनि स्थायी समिति बैठकमा भने त्यो विषय गम्भिर रुपमा उठ्ने निश्चित छ । स्मरणरहोस्, ओली स्थायी समितिमा निकै कमजोर छन्, बहुसंख्यक स्थायी समिति सदस्य अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल समुहका छन् । यदि बहुसंख्यक स्थायी समिति सदस्यबाट ओलीको राजीनामा माग भए उनि संकटमा पर्ने निश्चित छ । साथै एक व्यक्ति एक पद अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने कुरा सदर गराए पनि उनि निकै समस्यामा पर्दछन् ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठक अचानक स्थगित भएसँगै नेकपामा अर्को अन्यौंलता सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री एंव पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘प्रस्ताव तयार गर्न नसकेको र कामले थकित भएको’ भन्दै स्थायी समिति बैठक स्थगित गराएसँगै अन्यौंलता देखिएको हो । उनले बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा आफ्नो कुरा राखे पनि यसअघि नै निर्धारित गरिएको स्थायी समिति बैठकबारे आवश्यक निर्णय नलिई बैठकबाटै उठेर हिंडेका थिए ।
बहुमत स्थायी समिति सदस्यको मागअनुसार आयोजना भएको बैठकबारे गत २० वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकले मिति तय गरेको थियो । स्थायी समिति बैठकको मिति तय भएपनि बैठकमा प्रस्ताव गरिने एजेण्डाबारे भने अध्यक्षद्वयबीच कुरा नमिल्दा तय हुन सकेको थिएन । बुधबारकाे सचिवालय बैठकसँगै एजेण्डामात्रै नभई स्थायी समिति बैठक नै हुने नहुने, कहिले हुने अन्याैंल बनेकाे छ ।
किन भाग्दैछन् स्थायी समिति बैठकबाट ?
प्रधानमन्त्री एंव पार्टी अध्यक्ष केपि शर्मा ओली पछिल्लो विवादास्पद कदमहरुका कारण पार्टीभित्रै निकै विवादित र अलोकप्रिय बन्दै गएका छन् । सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा पनि उनको विरुद्वमा मोर्चाबन्दी बन्न थालेको छ । आफुँलाई एक्लाउन खोजिएको भन्दै ओलीले स्थायी समिति बैठक नबोलाउने रणनीति अघि सारेका हुन् ।
स्थायी समिति बैठकमा ‘एक व्यक्ति एक पद’को विषय गम्भिरताका साथ एजेण्डा उठाउने तयारी गरिएको छ । पार्टीको विधानमै भएको पार्टी नेतृत्व तहदेखि तल्लो तहसम्म एउटै व्यक्तिले धेरैवटा पद ओगटेको विषयमा नेताहरुले जोडतोडका साथ कुरा राख्ने तयारी थालेका छन् । ओली स्वयं प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पनि हुन् ।
ओली स्वंय दोहोरो जिम्मेवारीमा मात्रै नभएर उनी निकटका अधिकांश नेताहरु दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारीमा छन् । उनलाई साथ दिँदै आएका इश्वर पोखरेल पार्टी सचिवायल सदस्य, सरकारको उपप्रधानमन्त्री, पार्टीको स्कुल विभागलगायतका जिम्मेवारीमा छन् ।
ओली निकटका केहि नेता मुख्यमन्त्री र प्रदेश इन्चार्जसमेत छन् । मन्त्री भएकाहरु पार्टीको महत्वपूर्णं जिम्मेवारीलाई समेत ओगट्दै आएका छन् । यदि स्थायी समितिबाट ‘एक व्यक्ति एक पद’ कार्यान्वयन गराउने निर्णय भए उनि पूर्णंरुपमा संकटमा पर्दछन् । उनी निकटका धेरै नेताहरु पार्टीका महत्वपूर्णं जिम्मेवारीबाट विदा हुने परिस्थिति तयार हुन सक्छ ।
एकपछि अर्को भड्खालोमा पर्दैछन् ओली
ओलीले गत वैशाख ८ मा अपत्याशित रुपमा दुई वटा अध्यादेश (राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी)ल्याएका थिए । पार्टीलाई समेत छलेर ल्याएको दुवै अध्यादेश उनले अनौठो ढंगबाट मन्त्रिपरिषदबाट पास गराउँदै राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराएका थिए ।
अध्यादेशबारे छलफल गर्न बोलाइएको सचिवालय बैठकका बीच राष्ट्रपतिबाट अचानक उक्त अध्यादेश अनुमोदन गराइएको थियो । पार्टीभित्र निकै विरोधभएसँगै निकै लामो कसरत पछि फिर्ता लिएपनि उनिमाथि भने निकै आशंकाहरु जन्मिएका छन् ।
पार्टीभित्र शक्तिशाली बन्न र आवश्यक परे पार्टी फुटाउनसमेत सक्ने गरि रणनीतिक रुपमा ल्याइएको अध्यादेशसँगै ओली एकपछि अर्को संकटतिर उन्मुख छन् । उनि सचिवालय समितिमा एक्लिएका छन् भने पार्टीका अधिकांश कमिटिबाट झनै कमजोर बन्दै गएका छन् । आफैंले बनाएको रणनीतिका कारण उनले पार्टीको महत्वपूर्णं जिम्मेवारीबाट समेत हात धुने स्थिति आएको छ । ओली क्रमिक रुपमा मनमौजी निर्णय गर्ने स्थितिबाट कमजोर बन्दै गएका छन् ।
बैशाख २५ गते, २०७७ - १३:०४ मा प्रकाशित